ne admin pane 21-01-19
Nguva zhinji injini inodonha isingadzivisike, Kunyanya kana ukashandisa mafuta akashata, Pane zvakawanda zvisina kuchena mumafuta, Kwete chete kuti inowedzera kupfeka uye kubvaruka painjini, Inogona zvakare kukonzera injini yemafuta kubuda. Ngatikurukurei nezveZvimwe zvinobuda muvhavha yekamuri yevhavha. Chii chinokonzera vharafu cha ...
Ndeupi musiyano wekutakura chisimbiso uye nesimbi guruva chifukidziro?
Musiyano wekutakura chisimbiso uye simbi chivharo Basa rakasiyana - kutakura chisimbiso mhete ndeyekuisa chisimbiso kuita uye hupenyu hwebasa kune kukosha kwakakosha. - Kutakura chifukidziro cheguruva ndiko kudzivirira kuburitsa muguruva uye mamwe marara izvo zvinokanganisa basa. Mashoko akasiyana, akatakura chisimbiso R ...
Mangani marudzi emota zvisimbiso?
Mota zvisimbiso Zvinoshanda munzvimbo dzakasiyana. inogona kukamurwa muzvikamu zvinotevera zvinoenderana nezvakashandiswa: Direction mafuta chisimbiso, crankshaft mafuta chisimbiso, injini yemafuta chisimbiso, vharuvhu mafuta chisimbiso, mvura pombi mafuta chisimbiso, mafuta pombi mafuta chisimbiso, hutachiwana mafuta chisimbiso, ekisero mugodhi mafuta chisimbiso. vhiri hub hub, ...
chisimbiso chemafuta Zvakajairika zvikonzero zvekutadza uye nzira dzekugadzirisa matambudziko
Iyo chisimbiso chemafuta ndechechinhu chinofamba chekuisa chisimbiso, uye kuvepo kwe "yakaoma mafuta firimu" ndiyo inokwana uye inodiwa mamiriro eoiri chisimbiso.Nekuti kuvepo kwekuzora mafuta firimu kunokosha kuti uve nechokwadi chekukwesesa kwekukiya kukiya kwemafuta chisimbiso, uye iyo kuvapo kwe lubri ...
Zvisimbiso zvemafuta uye o mhete kits kutenga gwaro
Kana iwe uchida kutsvaga zvakavimbika zvisimbiso uye maO-zvindori muChina.Pane akawanda zvisimbiso zvinogadzira, pamwe iwe uchavhiringidzika, nekuti inzvimbo dzakasiyana, uye mutengo wakasiyana..Pachave nehunhu hwakasiyana hwezvisimbiso zvakasiyana. Nzira yekuwana sei yakavimbika mafuta chisimbiso uye o mhete? 1- Iyo chisimbiso chemafuta ...
Pfungwa Hydraulic zvisimbiso
Iyo Hydraulic mafuta chisimbiso inowanzo gadzirwa nerabha yekuisa chisimbiso zvinhu. Iyo rin'i mhete ine yakapusa dhizaini, yakanaka yekuisa chisimbiso kuita uye yakaderera kukakavara. Inogona kushandiswa pakuenzanisa kudzokorora uye kutenderera kufamba, asi inoshandiswa zvakanyanya kugadzirisa zvisimbiso, senge zvisimbiso pakati pemapaipi, humburumbira misoro uye ...
Mhando dzePower steering pombi yemafuta chisimbiso
Simba rekusimisa pombi mafuta chisimbiso: 1- kutenderera bhora simba kudhiraivha giya mafuta chisimbiso: kuisa mafuta chisimbiso uye rocker shaft mafuta chisimbiso. 2- giya rinotungamira giya mafuta chisimbiso: kuisa shaft mafuta chisimbiso, pinion shaft oiri chisimbiso, rack mutakuri mukati nekunze zvisimbiso zvemafuta. 3- mafuta chisimbiso chekufambisa hydraulic cylinder. 4-oiri gungwa ...
Magnetic zvisimbiso mharidzo uye maficha
Magnetic mafuta chisimbiso chigadzirwa chakagadzirwa mushure memakore ekutsvaga uye kuyedza. Inoshandisa zvine hungwaru modular magnetic muripo wehurongwa uye nyowani yekuisa chisimbiso tekinoroji, uye kuiswa kuri nyore kunogona kugadzirisa matambudziko anga akaoma kubvisa munhoroondo yeindasitiri. Haisi chete mhinduro ...
Rubha chisimbiso mhete mhando
U-yakaumbwa mhete, inowanzo shandiswa mukugadzirwa kwe hydraulic masisitimu mune anodzosera chisimbiso. Inoshandiswa zvakanyanya mumishini yekuvaka hydraulic cylinder chisimbiso. O-mhete inonyanya kushandiswa kusimbisa kunamira uye kudzosera chisimbiso. Kana ichishandiswa Rotary Movement chisimbiso, inogumira kune yakaderera kumhanya rotary chisimbiso ...
Mhinduro kune Oiri Leakage yeGearbox Oiri Seal?
Mechanical transmission ndiyo yakanyanya kuwanda muinjiniya yemagetsi. Inoshandiswa zvakanyanya kuendesa simba uye kupesana kutapurirana kunyanya nekukweshera kwesimba remuchina zvikamu, kusanganisira bhandi kufambisa, tambo kutapurirana uye kukweshera vhiri kutapurirana. Basic chigadzirwa kupatsanura: yokuderedza, br ...
9 Matipi esarudzo yezvisimbiso zverabha zvinhu?
Ndezvipi zvinhu zvakakosha zvinozotariswa pakusarudza chaiyo yekuisa chisimbiso zvinhu zvekushandisa? Unosarudza Mutengo uye Unokodzera Ruvara Kuwanikwa kwezvisimbiso.Zvese zvinhu zvinokonzeresa muchisimbiso system: eg tembiricha renji, fluid uye kumanikidza Izvi zvese zvinhu zvakakosha ...
Nyanzvi mechnical chisimbiso mugadziri yiwu chisimbiso chakakura cherabha zvigadzirwa kambani Mechanical zvisimbiso zvinoshanda mune yakasvibira svikiro kazhinji vanovimba nemvura firimu inoumbwa nemvura svikiro pakati pekupesana nzvimbo yekufamba uye yakamira zvindori zvekuzora. Naizvozvo, zvinodikanwa kuti maintai ...